TOOS ula soco abaalmarinta & qori-tuurka guruubyada CL – LIVE – Gool FM
TOOS ula soco abaalmarinta & qori-tuurka guruubyada CL – LIVE
(Monte Carlo) 24 Agoosto 2017 – Waxaa haatan bilaabatay samaynta isku aadka CL heerkiisa guruubyada oo waqti xaadirkan ka soconaya Monte Carlo.
Abaal marinta Madaxwaynaha (UEFA President’s Award): Francesco TOTTI
Raggii horay ugu guulaystay waxay kala ahaayeen: Paolo Maldini, Alfredo Di Stéfano, Sir Bobby Charlton, Eusébio, Raymond Kopa, Franz Beckenbauer iyo Johan Cruyff.
Gool walahii ugu wanaagsanaa 2016/17 UEFA Champions League: Gianluigi Buffon.
Waxaa haatan la sharraxayaa hab-raaca dheriyada lakala geliyay kooxaha kala geddisan iyadoo aysan isku beegmi karin kooxaha isku guruubka ku jira, waxaa howsha ka qayb qaadanaya kombiyuutar lagu barnaamijeeyay.
Waxaa masraxa taagan Totti, Shevchenko iyo Buffon oo ka qayb qaadanaya qabashada kooxaha ku kala jira dheriyada yar yar.
Daafacii ugu wanaagsanaa 2016/17 UEFA Champions League: Sergio Ramos
Waxaa haatan la galay dheriga 2-aad oo ay kooxaha kasoo baxaya kaalinta 2-aad ka gelayaan guruubka.
Laacibka ugu wanaagsan khadka dhexe ee 2016/17 UEFA Champions League: Luka Modric
Weeraryahankii ugu wanaagsanaa 2016/17 UEFA Champions League: Cristiano Ronaldo
Markan waxaa miiska saaran xiddigga sanadka ee 2016/17 UEFA Champions League oo ay iskula dheggan yihiin Leo Messi, Gianluigi Buffon iyo Cristiano Ronaldo. Sidoo kale gabadha sanadka ee UEFA ayaa lagu dhawaaqayaa.
Xiddigadda Lieke Martens ayaa noqotay gabadhii sanadkii tegey ugu wanaagsanayd 2016/17 UEFA Champions League
Xiddiggii sanad-ciyaareedkii tegey ee 2016/17 UEFA Champions League waa Cristiano Ronaldo.
Maxaa ka jira in Barcelona iyo Borussia Dortmund ay ka heshiiyeen saxiixa Ousmane Dembele?
DEG DEG: Isku aadka wareega guruubyada ee Champions League oo la sameeyay